I-ESRI-Mapinfo-Cadcorp yexabiso lexabiso - I-Geofumed
NgoDisemba, 2007 ArcGIS-ESRI, Cadcorp, Geospatial - GIS, GIS asibonise
Ngaphambili saqhathanisa iindleko zeelayisensi kwiipulatifomu ze-GIS, ubuncinane abo baxhasa iSQLServer 2008.
Olu luhlalutyo olwenziwa nguPetz, usuku olufuneka lwenze isigqibo sokuphumeza inkonzo yemephu (IMS). Ngenxa yoko wenza uthelekiso xa kwakunzima ukudibanisa abaqhubi ababini kwinqanaba ledeskithophu, ukulungiselela i-cartography kunye neenkonzo.
Amanani asePritish Pound, njengoko uPatrick wacacisiwe ngelo xesha, nangona idoli liye lahla ngokukhawuleza ubudlelwane buhlala.
Ilayisenisi ye-2 yoLuntu 2 £ 280 £ 560
Iimvume ze-2 I-ArcGIS 9 2 £ 1,450 £ 2,900
Ilayisenisi ze-2 i-Mapinfo Professional 2 £ 1,095 £ 2,190
I-2 CadCorp Iimvume zoMaphu weMephu 2 £ 2,200 £ 4,400
IMS CadCorp (umsebenzisi we-1?) 1 8,500 £ 8,500
IsiXhobo seWebhu seKlayenti 1 £ 1,000 £ 1,000
Kulungile ukuba i-ESRI ingabizi, kuba inceda ukugcinwa kwesikhulumi esaziwayo, kwaye sinokugwetyelwa ukubona ukuba asibonise, i sixhobo ngezihlandlo eziliqela Siye saqwalasela, kubonwa ngabasebenzisi abanolwazi; Ezi zinzuzo zokuncintisana kwamanani amashishini amancinci naphakathi ... kusekuyimfuneko ukuba ubone ukuba luhlala lugcinwe.
Post edlulileyo«Edlulileyo AutoCAD kunye ne-25 iminyaka
Post Next Guqula iifayile ze-dwg ngaphandle kwe-AutoCADOkulandelayo "
Iimpendulo ze-4 kwi "ESRI-Mapinfo-Cadcorp ixabiso lexabiso"
indlela endisebenza ngayo kunye ne-arc gis 9.2 kwingingqi ye-cadastre kungekudala kwaye ndineengxaki ezininzi malunga neenkcukacha zam zixelele ukuba ndinokusebenza kunye ne-sql yolwazi kodwa andazi ukuba usebenza njani ukuba unganinika ingxelo malunga nale yolwazi
kunye nenkxaso ...
anecdote ukusuka Inkulukazi Chive:
Ngenyanga okanye ngaphezulu edlulileyo sithole ibhulogi kwi-UMN Mapserver, kwakunzima kuthi ukuba sikholwe kuba kuyinyaniso kwaye sibone ibhulogi kwisofthiwe esinoqinileyo. Inyaniso kukuba yayinamafutha (kwaye sasinomthengi silindele isisombululo) kwaye sathetha ngoluhlu lweposi lwamabalazwe.
Kuvulwe ngokuzenzekelayo itikiti kwinkqubo yolawulo lweprojekthi kunye I-2 DAYS i-bug isisombululo kwi-version control yeprojekthi. Wasisusa ukukhuphela ikhowudi yomthombo ochanekileyo, ukuyiqokelela kunye neyonke i-3 okanye i-4 imihla kumxhasi eqhuba ngaphandle kweephutha.
Yiyo inkxaso: umgangatho, ngokukhawuleza, uthi inkululeko (ayinyani ngokupheleleyo, ixesha lilonke libiza into ethile, into enhle kukuba ikwabelwana) kwaye ekugqibeleni iphumelele.
Yintoni enye ongayicela?
Ndikunika isizathu kwiimeko zamanani, inani eliza kuzalisekisa i-IMS kufuneka lifumane amava ekuphuhliseni ukujonga enye indawo ekhululekile ... ngaphambi kokuba inkxaso leyo igxeka
kodwa i-ESRI ikuphendula ngokukhululekileyo? ... Ngokufanayo isiqinisekiso sihlala kuluntu abaphendulayo xa ufumana ubunzima.
Xa kuthelekiswa ngumlobi wokuqala (uPatrick) kwakungekho iGeomedia, mhlawumbi siya kujonga ngelinye ixesha
Andiyi kuhlambalaza nge-desktop ye-GIS (ephosakeleyo: P), kodwa ngokuqinisekileyo namhlanje ukuchitha imali kumaseva wemephu kufuneka UKUHLOLA, kwaye kuninzi, ngenxa yokuba isixa kunye neendidi zesisombululo samahhala inyaniso echitha loo mali kwi-ArcIMS, i-MapXtreme okanye nayiphi na into engicinga ukuba yindalo yangempela.
Ngendlela, ndiyamangaliswa ukuba iimveliso ze-Intergraph azibonakali kule faniso ...